Career-loving Women – How She Did It
Category: Career-loving Women
Posted December 16, 2020 December 16, 2020 Nang Ei Ei MonLeaveacommentPosted in Career Outlook
Posted December 16, 2020 Nang Ei Ei MonLeaveacommentPosted in Career Outlook
👉Facebook Page Manager ဆိုတာဘာလဲ ဒီဖက်ခေတ်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်လာနေကြပါပြီ။ online အသုံးပြုတာက ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိရောက်မှုရှိတာကတစ်ကြောင်း တစ်နေရာတည်းမဟုတ်ဘဲ တစ်မြို့လုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးအထိပါ ဖြန့်ကျက်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ပိုပြီးလူသိများစေလို့ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာထဲမှာ လူသုံးအများဆုံး မီဒီယာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း facebook ပါပဲ။ ဒါဆို facebook ကိုအသုံးပြုပြီး စီးပွားရေးလုပ်မယ့် facebook page ‌တစ်ခုတော့ ကျိန်း‌သေရှိဖို့လိုလာပါပြီနော်။ နောက်ပြီး page ပေါ်မှာပဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့က နည်းစနစ်တစ်ကျ ထိန်းကျောင်းပြုလုပ်ပေးမယ့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးလည်းလိုအပ်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီသူကတော့ facebook page manager ပါဘဲ။ facebook page manager တွေက page မှတဆင့် […]
Content Writer ဆိုတာ စာရေးစာဖတ်ကြိုက်သူတွေအတွက် လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် အလုပ်နေရာပါ။ လုပ်ငန်း၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးသူ၊စာဖတ်သူတွေကြား ယုံကြည်မှုရအောင် စာကနေတဆင့် ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ အလုပ်ပါ။ content ရေးခြင်း အတတ်ပညာကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီး စာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ content writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။။ Content Writer ကဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ? Content writer တွေက လုပ်ငန်းတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရှုလေ့လာချင်အောင် ရေးသာပေးရတာပါ။ စာပေဆောင်းပါးများ၊ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းများစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတဲ့ content အမျိုးအစားတွေလည်းပါပါတယ်။ Content Writer တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာရေးရမလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေးရမလဲဆိုတာကို သိနားလည်ပြီး […]
Posted September 15, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Career-loving Women, Women Entrepreneurship
ကျွန်မ အလုပ်စလုပ်ခါစ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကတည်းက လူကြီးသူမတွေအများစုက “အခွင့်အရေးဆိုတာ နှစ်ခါမလာဘူး” ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားဖို့၊ အမြဲတက်ကြွနေဖို့၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတွေ့ရင် လက်မနှေးဖို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ကြတယ်။ ဒီစကားကြောင့် ကျွန်မဘဝမှာ တက်လမ်းတွေအများကြီးပွင့်ခဲ့တယ်။ ဒီစကားကြောင့်လဲ သွက်လပ်တဲ့တွေးခေါ်မှုတွေ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တွေရလာတယ်။ ဒီစကားကိုလက်ကိုင်ထားလို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်တတ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီစကားက ကိုယ်နဲ့မကိုက်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်မအမြဲပြောဖူးတာလေးရှိတယ် – working woman နဲ့ working mother က ရေနဲ့ဆီလိုကွာခြားတယ်။ လူငယ်လူလွတ်ဘဝမှာတုန်းက အလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်တယ်၊ အလုပ်ပြီးရင် ညစာစားပွဲလည်းတက်နိုင်တယ်၊ စနေတနင်္ဂနွေ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုရင် လုပ်နိုင်တယ်။ ခရီးထွက်ဆိုရင်လည်း နီးတာဝေးတာကိစ္စမရှိဘူး အိပ်ကလေးထုပ်ပိုးပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထွက်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအရွယ်မှာ အဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ့်အတွက် အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ၊ လူမှုစက်ဝိုင်းအသစ်တွေ၊ ဗဟုသုတအသစ်တွေ၊ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေကို ရလာနိုင်ခဲ့တယ်။ […]
Posted September 15, 2019 September 15, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Career-loving Women, Popular Articles
သားသမီးရလာတဲ့အခါ အရင်အလုပ်ပြန်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ကျမှ အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား? အခုအရွယ်မှာ career အသစ်စတင်လို့ လွယ်ပါ့မလား? – လို့တိုင်ပင်ကြတယ်။ လွယ်တာတော့ ဘယ်အရာမှမလွယ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရယူနိုင်ဖို့က ဘယ်နေရာမှာမဆို လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လွယ်တာကိုတော့ ရွေးမလုပ်စေချင်ဘူး။ လွယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အရာက ကိုယ်မလုပ်ချင်တာဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းသလို၊ လုပ်ငန်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ ပြီးတော့ ဘယ်အရွယ်မှာမဆို career ပြောင်းတယ်ဆိုတာ နောက်မကျဘူးလို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ စနစ်တက်လုပ်တတ်ရင် စိတ်ကျေနှပ်မှုရတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ အရင်အလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ထက် အများကြီးသာနိုင်တယ်။ ဒါဆို Career Change တယ်ဆိုတာဘာလဲ? Career change တယ်ဆိုတာ အလုပ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီ company မှာမပျော်လို့ နောက် company ကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ – လူတွေအများကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပြီး […]